I-Herpes - okwandile isifo yegciwane ulwelwesi lwamafinyila, isimiso sezinzwa kanye isikhumba. Ngokwe-WHO izibalo, ezingaphezu kuka 90% abantu emhlabeni kukhona Isiphathi walo. Lesi sifo ayinakho yobudala. Elinegciwane kubo abadala nje kuphela kodwa futhi izingane ezineminyaka engu-3-4 kweminyaka, ngokushesha nje lapho ekwindla isimo senhlalo (izingadi, izikhungo zemfundo).
igciwane lohlobo akwelapheki, kuba amangqamuzana omuntu ukuphila ifomu esicashile. Uyahluleka uma elwa nokuphuza zenzeka kuye izinto eziningi. Ukuze ezinye izakhamuzi zokugula kungaba esisongela ukuphila - kudinga njalo yokwelapha yesondlo. Ososayensi bazi izinhlobonhlobo engaphezu kwamakhulu amabili herpes, kodwa kuphela 8 ziyingozi abantu. Namuhla sizoxoxa Herpetic Whitlow (izilonda abandayo ezandleni), uhlobo lokuqala HSV-1.
Nakuba izifundo laboratory bathole ukuthi ukutheleleka ingena emzimbeni zisencane emva contact ethintekayo neziguli - indlela yokuxhumana-yasendlini. Ngemva Ukungena esitokisini isikhathi eside, le Lingaqhubeka ngokwayo akukuniki phandle, futhi ivuselelwe kuphela ekunciphiseni umzimba ozivikela. Lokhu lula komkhuhlane, ukudana, ukukhathala, futhi eziningi nezinye izinto ezingezinhle.
Izilonda Cold ezandleni, okuyinto isithombe ngokucacile ikhombisa izimpawu, reaktiviziruetsya eziningi entwasahlobo nasebusika. Ubangela uyahluleka uma elwa nokuphuza asebenzayo angasebenza superheat futhi subcooling yomzimba, imikhuhlane njalo, inhlanzeko ukungahambisani (autoinfection kwenzeka). Ngaphezu kwalokho, ukungalingani hormone, izisu njalo nezinye izinqubo zokwelapha.
I-Herpes ezandleni (Herpetic Whitlow) libhekene izici ezivamile njenganoma yiluphi olunye uhlobo igciwane. isikhathi olunamandla kuphakamisa kancane imfiva, ukukhathala, imfiva, ikhanda, ukuhlanza kanye nesicanucanu. Ukubonakaliswa main kuyinto ukuqubuka ethize color pink-bomvu ngesimo Bubbles nge uketshezi esobala futhi vesicles.
Njengoba ukuphulukiswa basuke iguqulwe ibe uqweqwe aphuzi-grey. Phakathi nale nkathi, isiguli uzizwa ukulunywa ezinzima, ukuluma kancane endaweni kwasendaweni, evutha ukuzwa, ikakhulukazi uma nabo amanzi ashisayo. i-signal lube buthaka izivikeli mzimba uyahluleka uma elwa nokuphuza okunjalo.
I-Herpes ezandleni: ukwelashwa nesineke
Ekuqaleni kudingeka ukuxilonga izifo. Lokhu bekulokhu wesikhumba futhi wesikhumba. Ngokuvamile igciwane lohlobo ukutholwa kuhlolwe ngamehlo, kwasendaweni nezibonakaliso emtholampilo. usizo zokwazisa ukubona isifo ukuhlolwa bendabuko ezifana PCR indlela and definition virological. Kugcine ekhiqizwa ngisho nalapho asymptomatic.
Uma ukuqinisekisile herpes phezu iminwe, inikezwa yokwelapha eziyinkimbinkimbi, kuhlanganise nemithi elwa namagciwane, amavithamini, futhi immunomodulators. Mhlawumbe ukusetshenziswa analgesics futhi antipyretics. Imakethe ezithaka imithi imelelwa okunezinhlobonhlobo ocebile izidakamizwa elwa namagciwane, ekusizeni ukuvimba igciwane futhi kuvimbele yokutheleleka kwamaseli enempilo. Phakathi ukukhululwa ethandwa kakhulu futhi ngempumelelo, "Acyclovir" "Famciclovir," "Valacyclovir."
Ukuze wehlise ukulunywa, evutha nokuvuvukala asetshenziswa antihistamine imithi, "Suprastin", "Diphenhydramine", "Tavegil", "Zovirax". Uma isiguli ukudakwa ezinzima, esimisiwe anticonvulsants. Advantageously nokusetshenziswa kwamavithamini A, B, C. Kufanele banamathele izinhlobo ezithile zokudla (kungafaki losiwe, ezinoshukela, isilovela) ukwakha isizinda evumayo ngokomzwelo futhi bagcine inhlanzeko. Isikimu efanayo iphathwa herpes ezandleni yengane.
Ngeke zilimaze ukusetshenziswa infusions amakhambi, obhavu kanye ukulibopha. Njengoba wazi, utshani ukunqampunwa bacterium, ukunciphisa ukushisa bese ukuqinisa umzimba wethu, okuyilona elidingekayo ukuze umuntu herpes. Ukulandela zokupheka bendabuko kuzosiza ukuthuthukisa isimo sesikhumba.
Esigabeni oyingozi futhi ezingalapheki zingafundwa ngemlomo nangekubhala ihlelwe ngokulandelana kwezihloko ijusi fresh enhlaba. Yidla izidakamizwa ngaphambi kokudla, kathathu ngosuku elimnandi spoon. Futhi gcoba izindawo kuthinteke.
Umpe celandine - ithuluzi eside ekulweni ukutheleleka. Phatha i-herpes juice esandleni, impatho Kwenziwa kabili ngosuku, le nqubo ithatha akukho kuka imizuzu emibili.
Ababoshwe igciwane Kugcwele usizo Melissa: ezimbili izinkomishi zamanzi abilayo ukuthatha 30 oz. utshani. Phikelela kuze kuphele isigamu sehora, isiphuzo ehlungiwe umhluzi ½ inkomishi kathathu ngosuku.
Ngenxa yalezi zinjongo, kutuswa ukuba athathe zezinkambi of chamomile, calendula, burdock, Leonurus, wort iSt John sika. izitshalo Immunostimulatory kubhekwe lemongrass, Rhodiola rosea, Aloe Vera futhi Echinacea.
Vimbela izilonda abandayo ezandleni kungaba, uma ulandela imithetho ezilula ezimbalwa kanye nezincomo. Okokuqala, sebenzisa kuphela imikhiqizo ukunakekelwa siqu, futhi okwesibili, ukugeza izandla njalo futhi usebenzise usula ezimanzi. Okwesithathu, wapha ngokugcwele, guzzle Vitamin eziyinkimbinkimbi njalo ngonyaka. amathiphu Simple and ngempumelelo ukusiza ukuvimbela igciwane nokuqubuka.
Kwenzekani kumuntu onalesi sifo
ngenalwazi ntu zicabanga ukuthi i-herpes esandleni (izithombe okusesihlokweni esithi) - isimo okungalimazi. akudingi ukwelashwa. Empeleni lokhu akulona iqiniso. Lesifo idluliselwa utero ingane ukuthi kungabangela eziyingozi on the ingxenye isimiso sezinzwa esiyinhloko futhi uhlelo neuropathy. Futhi kule nqubo sokugembula Ngokuvamile lokhu kwakuhilela ngokweqile, izitho zokugaya. It kwandisa ingozi zokuzalwa zezingane engqondweni kwengqondo kahle ukuzwa kanye motor amakhono. Futhi kungase kutholakale ukuthi herpes njalo yansukuzonke (ezandleni) kuphakamisa ukwakhiwa kwezinye izinhlobo igciwane.
Kahle kwegazi: izimbangela, izimpawu, nemiphumela. Cerebrovascular ingozi: Izimpawu kanye Ukwelashwa
Ikhanda elibuhlungu ngokutshekisa ikhanda. Izimbangela, ukwelashwa
Ngokucacile umsebenzi kanye iholo uhlelo